Subxaanallah, Qoys Dhan oo Turkiya oo Gacmaha ku socda! - BAARGAAL.NET
Subxaanallah, Qoys Dhan oo Turkiya oo Gacmaha ku socda!
Subxaanallah, Reer Qoys Dhan ah oo Turkiya oo Lugaha iyo Gacmaha ku socda!, Waxaa la keenay Badda waligood Bad ma aysan Arag, Hooyadii Ilmaha dhashay ayaa tiri, "Uma Qabin wax sidaan u qurux badan in Ilaahay Abuuray!".
Aabbaha Ilmaha dhalay ayaa Dhakhaatiirta Sayniska ka codsaday in ay u sheegaan waxa ka khaldan Qoyskiisa. Dadkan waxa ka dhiman isku dheelitirka jirka. Waxaa suurta gala, in Qabiilo dhan oo Turkiga dagan ay sidaas yihiin!. Qaarkood hadda waxaa la barayaa sida loo socdo